Benza lunongeke uhlelo laba bantu | IOL Isolezwe
Benza lunongeke uhlelo laba bantu
Isolezwe / 19 June 2012, 12:35pm /
UBLESSING "MaBlerh" Cele onesigaba sokukhipha imigosi namancoko ngosaziwayo ohlelweni lukaSgqemeza
LUHEHA abalaleli uhlelo kukaSipho "Sgqemeza" Mbatha kuKhozi FM ngenxa yesigaba semigosi yosaziwayo
PHAMBILINI umuntu owayegqama kakhulu emsakazweni kwakuba ngumsakazi kodwa manje izinto sezishintshile njengoba sekuke kudume kakhulu abantu abalekelelayo kunabasakazi.
Okunye futhi kunalabo abalekelelayo abalenza lube mnandi uhlelo kumbe ube nesizathu sokulalela umsakazo.
U-Ayanda Msweli wenza omuhle umsebenzi ngokusibikela ukuthi kwenzekani emgwaqweni. Okuhle ngale nsizwa wukuthi ibuye iphonse namancoko amancane lapha nalaphaya okwenza kube lula ukulalela lesi sigaba sakhe esisohlelweni lukaLinda Sibiya, iVuka Mzansi kuKhozi FM.
ULangalakhe Zwane ositshela ngezitimela ungomunye wabantu abanezigaba ezinhlelweni zomsakazo kodwa abaduma kakhulu yize enemizuzu emibili vo kulona lolu hlelo lukaLinda.
Iphuzu elibalulekile wukuthi umsakazo awusagcini ngokunandiswa wumsakazi nje kuphela kodwa nabantu abangahlangene nohlelo balugcina lumnandi kumbe kube khona abantu abalandela lezo zigatshana eziza nabantu abalekelelayo bebe bengeyona ingxenye yomsakazo nokukhuphula izibalo zabalaleli.
UNhlanhla Mtaka ohlaziya ipolitiki ngolimi lwesiZulu, usezakhele olukhulu udumo, nengikholwa wukuthi kunabalaleli abalalela uhlelo lwasekuseni ngoba befuna ukulalela le nsizwa.
EkaPastor Sthembiso Zondo obenza izinkulumo zokugqugquzela abalaleli, iligqamisa kahle leli phuzu.
Iningi labantu abalalela uhlelo lukaSipho Mbatha odume ngoSgqemeza abawuvali umlomo ngensizwa engena nomgosi kulolu hlelo, uBlessing Cele odume ngelikaMaBlerh.
Vele luyasha uhlelo lukaSgqemeza, lokho akubuzwa kodwa baningi abantu abathanda le nsizwa engena ngoMsombuluko, ngo-5 ntambama.
Ngisho nasematekisini uzwa abantu bekhuluma ngayo le nsizwa, kunalabo abathi abafuni ukuphuthwa yiyona ngoba ibaphakela ezinohlonze ngosaziwayo.
Ngaphandle kwalokho iyabalanda ibafake emoyeni uma kunezindaba ezibathinta ngqo ikakhulukazi lezo eziphume emaphepheni angeSonto.
UVukani Masinga odume ngoChilli M abantu abalalela uhlelo lwakhe bayamazi kodwa ngicabanga ukuthi Amapentshisi nawo asezakhele olwawo udumo ngokwelekelela kulolu hlelo.
Kulezi zinsuku nje sekubhalwa futhi kuphawulwa kakhulu ngaMapentshisi emaphepheni ukwedlula uChilli M, okunguyena oshayela uhlelo.
Ohlelweni lwasekuseni kuMetro FM, olushayelwa nguGlen Lewis no-Unathi Msengana kunesigatshana sikaCarmen oshayela abantu izingcingo adlale ngabo, phecelezi okubizwa nge-prank.
Lesi sigaba singezinye abalaleli balolu hlelo abakhuluma ngazo ngapha nangapha.
Konke lokhu kuligqamisa kahle leli phuzu lokubaluleka kwabantu abasuke beyingxenye yezinhlelo emsakazweni. Yingakho abasakazi nezikhulu zabo kumele baqikelele ukuthi ezinhlelweni zabo banandisa ngabantu abazohambisana kakhulu nenhloso yomsakazo, okungukwazisa, ukufundisa nokujabulisa abalaleli.